दसैं अनुभव : यसपालीको दसैं पनि अस्पतालमै « Mero LifeStyle
दसैं अनुभव : यसपालीको दसैं पनि अस्पतालमै
सुमित्रा लुईंटेल	|| 14 October, 2021
डा.अनुप बास्तोला, निर्देशक, टेकु अस्पताल
चिकित्सकीय पेशा बिरामीको सेवामा व्यस्त रहने पेशा हो । वर्ष दिनमा आउने चाड दसैंमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पनि आफ्नै भोगाई तथा अनुभूति हुन्छन् । दसैंमा प्रसाशनिक मात्र होइन, आकस्मिक सेवा नभएका स्वास्थ्य केन्द्रहरु विदामा हुन्छन् । तर, अस्पतालको आकस्मिक सेवा चौबिसै घण्टा खुल्ला हुने भएकोले चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी दुई वर्ष यता महामारीले गर्दा बिदा बस्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले दसैंलाई कसरी सम्झन्छन् त ? यस्तो छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोलाको दसैं अनुभव ः
मेरो दसैं प्रायः काठमाडौंमै हुन्छ । दसैं तथा अन्य चाडबाडमा अस्पतालमा ड्युटी गर्ने डाक्टरमा पर्छु । मेरो जन्मथलो पोखरा हो । यो पेसामा आवद्ध भएदेखि धेरैमा २ देखि ३ पटकमात्र पोखरा गएको छु ।
अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना माहामारीले गर्दा अस्पतालमा नै दसैं मनाएको थिएँ । त्यो समयमा दिर्घ रोगका बिरामी र वृद्धवृद्धाहरु बढी प्रभावित भएकाले अस्पतालमा धेरै चाप थियो । नेपालमा कोरोना महामारी भएसँगै प्रायः चाडबाडमा घरपरिवारलाई समय दिन पाइएको छैन ।हामीलाई समय नदिएको भनेर परिवारबाट कहीलेकाँही गुनासो पनि आउँछ । तर, एउटा डाक्टर भएपछि बिरामीलाई सेवा गर्नु मेरो दायित्व हो । अस्पतालको टिम र अस्पतालमा आएका बिरामी पनि मेरो परिवार हो ।
अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना माहामारीले गर्दा अस्पतालमा नै दसैं मनाएको थिएँ । त्यो समयमा दिर्घ रोगका बिरामी र वृद्धवृद्धाहरु बढी प्रभावित भएकाले अस्पतालमा धेरै चाप थियो । नेपालमा कोरोना महामारी भएसँगै प्रायः चाडबाडमा घरपरिवारलाई समय दिन पाइएको छैन ।
हामीलाई समय नदिएको भनेर परिवारबाट कहीलेकाँही गुनासो पनि आउँछ । तर, एउटा डाक्टर भएपछि बिरामीलाई सेवा गर्नु मेरो दायित्व हो । अस्पतालको टिम र अस्पतालमा आएका बिरामी पनि मेरो परिवार हो । उहाँहरुसँगै दसैं मनाउनुको खुशी पनि छुट्टै प्रकारको छ ।
आइसियूका इन्चार्जको हातबाट टिका लगाएर, टिम तथा बिरामीसँग खुशी साटेर अघिल्लो वर्षको दसैं बितेको थियो । यो वर्ष पनि मेरो दसैं अस्पतालमा नै हुन्छ होला ।
अहिले निर्देशक भएपछि प्रशासकीय जिम्मेवारी थपिएको छ । जसले गर्दा बिरामीहरुसँग समय बिताउन पाएको छैन । दसैंमा प्रशासकीय काम नहुने भएकाले बिरामी तथा टिमसँग मिलेर दसैं मनाउने योजना छ ।कोरोनाको बिरामीहरुको अस्पताल बसाई लामो हुन्छ । उनीहरुसँग चिनजान हुन्छ, आत्मिय महसुस हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई अस्पतालमै दसैंको माहोल सिर्जना गराउन मनपर्छ ।
अहिले निर्देशक भएपछि प्रशासकीय जिम्मेवारी थपिएको छ । जसले गर्दा बिरामीहरुसँग समय बिताउन पाएको छैन । दसैंमा प्रशासकीय काम नहुने भएकाले बिरामी तथा टिमसँग मिलेर दसैं मनाउने योजना छ ।कोरोनाको बिरामीहरुको अस्पताल बसाई लामो हुन्छ । उनीहरुसँग चिनजान हुन्छ, आत्मिय महसुस हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाई अस्पतालमै दसैंको माहोल सिर्जना गराउन मनपर्छ । यसो गर्दा अस्पतालका बिरामीलाई दसैं छुटाएको अनुभूति हुँदैन । त्यसैले खुशी हुनलाई कहिँ जानुपर्दैन जो आफ्नै मनमा छ ।
अस्पतालमा बिरामीलाई पनि हामीले दसैँको फिल गराउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । आफ्नो मात्रै परिवारका सदस्यको चिन्ता भन्दापनि अस्पतालमा ठूलो संख्याका परिवारका सदस्यहरु हुन्छन् । उनीहरुको अनुहारमा खुशी फर्काउनु छ भन्ने लाग्छ । अस्पतालको ढोका बाहिर आएर कुरेर बसेका आफन्तलाई बिरामीलाई निको पारेर पठाउन पाउँदा चाडबाड भन्दा बढी खुसी मिल्छ । त्यसैले दसैंमा बिदा नपाउँदा पनि मलाई कुनै गुनासो छैन ।